Xubno Xilal Sare ka Soo Qabtay Degaanka Somalida Ethiopia oo ku Biiray ONLF – Rasaasa News
Addis Ababa, August 20, 2011 [ras] – xubno qabtay xilalalka ugu sareeya ee xafiisyada dawlada degaana Somalida Ethiopia oo ku biiray ururka nabada qaatay ee ONLF, kuwaas oo leh damac siyaasadeed.
Xubnaha ku biiray ururka ee aan wali si cad isu muujin, waxaa ka mid ah baa la leeyahay madaxweynihii hore ee degaanka Somalida Ethiopia Cabdulahi Xasan [Lug-buur], oo Addis Ababa ku sugan tan iyo intii xilka laga qaaday. Cabdulahi waxaa uu ku magacaaban yahay wasiir ku xigeen, laakiin ma cada hawsha uu ka qabto xafiiska uu ku magacaaban yahay.
Ururka nabada qaatay ee ONLF, ayaa isagu aad ugu mashquulsanaa mudooyinkii ugu dambeeyeyba sidii uu u furan lahaa xisbi siyaasadeed oo nabad ku dhisan lana jaan qaadi kara nidaamka xisbiyada ee ka jira dalka Ethiopia.
Xisbiga ONLF, ayuu hankiisu yahay in uu ka qayb galo doorashooyinka guud ee ka dhici doona dalka Ethiopia shan sano ka dib. Ururuku wuxuu ku han weyn yahay in inta ka horaysa doorashada uu helo siyaasiyiin ku guulaysan kara tartanka xubinimada baarlamanka ee dalka Ethiopia.
Sida ay wararku sheegayaan xisbiga ONLF, wuxuu isku taxalujinayaa in uu ku guulaysto madaxtinimada dalka Ethiopia tobanka sano ee soo socota. Arintaas oo la filayo in uu xisbigu gali doono tabaabushe, isaga oo ka faa,iidaysanaya mudada dheer ee uu haysto, sida la sheegay wuxuu xafiisyo ka furan doona sagaalka degaan ee Ethiopia iyo dibadaha.
Xubnaha ilaa iyo hada si hoose loo sheegay in ay la shaqaynayaan xisbiga ONLF, ayaa waxaa ka mid ah rug cadaaga aqoonta leh ee Axmed Sheekh, oo in badan ka soo shaqeeyey degaanka Somalida Ethiopia iyo Cabdulahi Gariile oo ka mida Qurba joogta Maraykanka in badana ahaa dadka taageera siyaasada dawlada Ethiopia.
Waxaa kale oo ka mid ah baa la leeyahay xubno badan oo hore ugu jiray ururka nabada iyo horumarinta Ethiopia, oo jeclaystay hada in ay dhinaca siyaasada u baydhaan. Waxaa ka mid ah baa la leeyahay Nuur Cade oo xidhiidh fiican la leh danjirayaasha dawlada Ethiopia ee Yurub.
Waxaa kale oo ka mid ah baa la leeyahay xubno hore uga tirsanaa baarlamanka federalka iyo kuwa degaanka Somalida Ethiopia mudana ku noolaa qurbaha, oo laga magac dhabay Jamaal.
Hadii ay arintani tahay sida loo sheegayo, waa arin loo baahnaa mar hore in ay sameeyaan siyaasiyiinta u dhalatay degaanka Somalida Ethiopia ee la dhanka ah dawlada federalka.
Siyaasiyiinta iyo Aqoonleyda degaank Somalidu waxay ahayd in ay ka waan toobaan ku xoonsanaanta maamulka Jijiga iyo is jiid jiidadkiisa, waxna la qaybsadaan dadweynaha reer Ethiopia.
Waxaa xaqiiq ah in talaabooyinka uu qaadayo ururka nabada ee ONLF, uu soo jiidan karo siyaasiyiin miisaan culus leh, aqoona u leh fahamka iyo dhexgalka Ethiopia, kuwaas oo ku nool dalka dibadiisa iyo gudahaba.
Qoomiyadaha kale ee Ethiopia waxaa ay leeyihiin xisbiyo nabadeed oo ka qayb gala doorashooyinka guud, lehna afkaar nabadeed iyo damac awoodeed oo dalka oo dhan ah.
Hadii ay arintani hirgasho waxaa meesha ka baxaysa faquuqa ay qoomiyadaha kale ee Ethiopia ku hayaan Somalida Ethiopia, kuwaas oo aan rumaysnayba in Somalidu tahay Ethiopian.
Waxaad akhridaa: Retta said: “What we are trying to do here is whether you are an Amhara, an Oromo, Tigrey, Guragi, Gambella; whatever ethnic group you are, you are an Ethiopian. That is the first thing, and when people come here, we want them to feel that this is their home, this is their place equally.”
FG; Xuquuqda warkan wuxuu u sugnaaday xaqlaha rasaasa.com way soo gubisay kaliya.